Gcina $ 50 kubulungu bakho boPapasho beProjs | Martech Zone
Gcina $ 50 kubulungu bakho boPapasho beProjs Pro
NgoMgqibelo, uJanuwari 5, 2013 NgoMgqibelo, uJanuwari 5, 2013 Douglas Karr
Ukuba awuzange ujonge ezinye zezibonelelo ezimangalisayo kunye nezifundo ezikhoyo IiNtengiso zeNtengiso, kufanelekile. Ngaphezulu kweminyaka eli-10, i-MarketingProfs ibonakalise iingcali ezisebenza ngokwenene-kwaye yintoni engasebenziyo kwindawo yentengiso namhlanje.
Ubulungu obuSisiseko kubandakanya ukufikelela kwilayibrari etyebileyo yamanqaku kunye neeleta zeendaba. Ubulungu be-PRO bongeza indlela-kwiisemina, mfutshane Thatha i-10 yewebhu, ukhuthazo lokuQokelelwa kweNkundla, iiSmartTools eziluncedo, nokunye okuninzi. Joyina namhlanje, kwaye ufunde ukuba kutheni ngaphezulu kweengcali ezingama-492,000 zixhomekeke kwiiNtengisoProfs ukubanceda ukuba bakhe iinkqubo zentengiso ezisebenzayo.
Joyina namhlanje usebenzisa ikhowudi yekhuphoni I-DKVIP kwaye uyakufumana isaphulelo se- $ 50 kwiindleko zobulungu be-PRO ze- $ 279!
I-Intanethi izele ziingcebiso malunga nentengiso, iingcebiso kwezentengiso, kunye neengcali zentengiso- kodwa uninzi lwento engaphandle inokuba yinkunkuma emsulwa okanye iyabhidisa. Iqela lokuhlelaPrincessProfs lisika kuyo yonke le ngxolo yokuthengisa ukuze lifumane iingcali kunye nabathengisi abasemngciphekweni abaziyo ukuba bathetha ngantoni. Bathatha indlela yabo yokuyazi kwaye bayidibanise nobuchule babo bokuthengisa ukuze buguquke bube yingcebiso esebenzayo onokuyisebenzisa kwiincwadana zethu, iinkomfa, iisemina, ipodcast, amanqaku, kunye newebhu.
Kuya kufuneka bayenze ngokuchanekileyo, bayinkampani yezigidi zeedola ekhonza uluntu olungaphezulu koosomashishini abangama-492,000, abanini bamashishini amancinci, kunye nabathengisi abaziingcali kwezona nkampani zinkulu ehlabathini.
Ikhadi eliKhethekileyo loShishino… i-Chip
Nxibelelana kwakhona: Ukuvelisa umxholo ongcono rhoqo